Jurgen Klopp Oo Loo Sheegay Inuu SADDEXDAN Ciyaartoy Kusoo Xoojiyo Kooxdiisa Liverpool Suuqa January. - Gool24.Net
Jurgen Klopp Oo Loo Sheegay Inuu SADDEXDAN Ciyaartoy Kusoo Xoojiyo Kooxdiisa Liverpool Suuqa January.
Wargeyska ree England ee Express Sport ayaa soo xulay liis ka kooban saddex ciyaartoy oo uu ku qiimeeyay kuwa ay tahay inuu tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp kusoo xoojiyo safka kooxdiisa ugu horreyn suuqa bisha January ilaa xagaaga dambe.
Iyadoo ay ciyaartoy badan oo kooxda koowaad kamid ahaa sida Alberto Moreno and Daniel Sturridge ay kooxda ka baxeen ayay dad badani is weydiinayeen sababta uu Klopp kooxda ugu soo dari waayay ciyaartoy xoojin ah.
Reds ayaa suuqii tagay kala soo wareegay saddexda xiddig ee kala ah Sepp van den Berg, Harvey Elliott iyo Adrian kuwaas oo aan midkoodna toos usoo shalay shaxda asaasiga ah ee kooxda.
Haddaba, Waxaanu halkan ku muujin doonaa saddexda xiddig ee uu wargeyskani Klopp u sheegay inuu saxeexyadooda sameeyo oo labada dambe ay yihiin kuwo yaab leh maadaama aan hore loola xidhiidhin kooxdan.
Kai Havertz, Khad Dhexe, Bayer Leverkusen
20 jirkan ayaa kamida xiddigaha da’yarta ah ee qaarada Yurub kuwooda ugu wanaagsan, Wargeyska ree Germany ee Sport1 ayaa dhawaan sheegay in Liverpool ay kamid tahay kooxaha xiisaha u qaba.
Havertz ayaa xilli ciyaareedkii hore awood ciyaareed oo muuqata kusoo bandhigay Leverkusen kaddib markii uu 20 gool soo dhaliyay toddoba kalena caawiye kasoo ahaa tartamada oo dhan.
Sergi Roberto, Daafac, Barcelona
Iyadoo Alexander-Arnold iyo Joe Gomez ay yihiin labada daafac midig ee kooxda isla markaana daafaca bidix ee kaliyi uu yahay Andy Robertson, Klopp ayaa dhaawacyo kooban ka xiga musiibo ku habsata.
Roberto ayaa kusoo daris aan caadi ahayn u noqon lahaa safka Jurgen Klopp maadaama oo uu labada garab daafacba ka ciyaaro isagoo kaabis u noqonaya daafacyada garbaha ee kooxda sidoo kalena ay meesha taalo awoodiisa khadka dhexe.
Dusan Tadic, Weeraryahan, Ajax
Dusan Tadic oo xubin muhiim ah ka ahaa kooxdii Ajax ee wareega afar dhammaadka ka gaadhay Champions League ayaa ku haboonaan lahaa Liverpool.
Tadic ayaa Reds ka caawin kara booska garabka bidix ee Sadio Mane oo uu Divock Origi yahay xiddiga kale ee haatan booskaas ka ciyaari kara si lamid ah booska weerarka dhexe oo uu in badan kasoo dheelay.